Akụkọ - Otu esi emeziwanye arụmọrụ anyị site na mmemme CNC machining center
Olee otú ka mma anyị mmepụta arụmọrụ site CNC machining center mmemme
Na CNC nkenke machining, olee otú iji melite mmepụta arụmọrụ site na CNC machining center mmemme bụ a chọrọ N'ezie maka machining nkọ. Ihe ndị metụtara nrụpụta ọrụ CNC gụnyere nsogbu ngwaọrụ, nsogbu mmezi, akụrụngwa igwe, wdg.
Nke mbụ, tupu mmemme na CNC machining center, anyị kwesịrị iji nlezianya na-amụ ngwaahịa Eserese, chepụta nhazi ụzọ nke ngwaahịa, na-akwadebe ndị kwesịrị ekwesị machining ngwaọrụ. N'okpuru ọnọdụ iji hụ na ị na-arụ ọrụ ziri ezi, a ga-arụ ọrụ igwe ahụ n'otu oge dị ka o kwere mee, iji belata oge nhazi nke igwe ahụ. A gharịrị ịtụle ya mgbe mmemme na CNC machining center.
1. Na otu oge n'ọnọdu na clamping, nhazi kwesịrị dechara n'otu oge dị ka o kwere omume, ka ibelata nhazi oge nke workpiece, ebelata inyeaka oge ma belata mmepụta na-eri;
2. N'ime usoro mmemme, attentionaa ntị na ezi uche nke ịgbanye ngwá ọrụ iji belata oge nke ngwa ọrụ. Ebe a ga-arụ ọrụ site na otu ngwá ọrụ ahụ ga-agwụcha n'otu oge dị ka o kwere mee, iji zere igbu oge nke na-agbanwe ngwa ngwa mgbe niile ma melite arụmọrụ mmepụta;
3. Iji belata oge na-agba ọsọ nke igwe ma melite arụmọrụ na-arụpụta ihe, ekwesiri ị attentiona ntị na ụkpụrụ nke nhazi nhazi nke akụkụ ndị dị n'akụkụ na mmemme;
4. Na mmemme, ịtụle ụzọ nke ịhazi ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ ọnụ, ịhazi ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ n'otu oge nwere ike belata oge mmechi na ịpị.
5. N'ime usoro mmemme, ọ dị mkpa iji zere ugboro ugboro nke ntuziaka ndị na-abaghị uru ma mee ngwa ngwa n'okpuru enweghị ibu ọrụ iji belata oge echere.
Na mgbakwunye na n'elu ihe kpatara site na CNC machining center mmemme arụmọrụ, ezi uche nke ngwaahịa imewe eletrik nwere ike ukwuu ebelata inyeaka nhazi oge. Na nkenke, enwere ọtụtụ ihe na-emetụta arụmọrụ CNC. Attention Paya ntị na nkọwa nwere ike ime ka arụmọrụ arụmọrụ dịkwuo mma.